Nhau - Arenti Anogadza Eleczar seMunharaunda Distributor muMorocco
Arenti Anosarudza Eleczar seMunharaunda Distributor muMorocco
Hangzhou - Zvita 24, 2021 - Arenti, anotungamira IoT smart home chengetedzo kamera mupi, nhasi azivisa kuti iri kuvhura kuvepo kwayo muMorocco neEleczar semugovanisi wayo wese akateedzana chigadzirwa renji.
Iko kudyidzana kutsva kunowedzera bhizinesi reArenti kusimudzira mutengi wayo wevatengesi muMorocco neNorth Africa.
Eleczar ndiye mutungamiriri anotungamira weMorocco wezvinhu zvekumba zvine hungwaru, senge smart taa, maalarm. Adnane Zeroual, Muridzi weEleczar, akati, "Patakaona dhizaini yeArenti kamera paFacebook, takataurirana naArenti nekukurumidza kuti tibatsirane uye takagutsikana nekuita uye mhando mushure mekuyedza zvigadzirwa, saka takafunga kugovera Arenti makamera muna Zvita uye akaisa yekutanga odha iyo yatinosvika munguva pfupi. Takatumidzwa zviri pamutemo semugovera uye mutengesi weArenti makamera akateedzana kubvira muna Ndira 1, 2021. Tinodada nekubatana uye tinovimba zvizere nemhinduro dzatinogona kupa pamwechete naArenti. ”
Kubatana kwakananga naEleczar kuchaitwa kubva muna Ndira 1, 2021.
Arenti iri kutsvaga kupa vashandisi vepasirese zviri nyore, zvakachengeteka, uye zvine hungwaru zvigadzirwa zvekuchengetedza pamba & mhinduro pamwe neakakwana mubatanidzwa wekucheka-kumucheto dhizaini, mutengo unodhura, tekinoroji yepamberi & mushandisi-anoshanda mabasa.
Arenti Technology iri rinotungamira AIoT boka rinotarisana nekuunza zvakachengeteka, zviri nyore, zvine hungwaru zvigadzirwa zvekuchengetedza pamba kune vashandisi vepasirese. Akazvarwa muNetherlands, Arenti yakavambwa neboka revanyanzvi vanobva kunzvimbo dzakasiyana kusanganisira kambani yepasirese yekuchengetedza, hupfumi hwepasi rose makambani mazana mashanu, uye yepasirose inotungamira smart home chikuva. Arenti yepakati timu ine anopfuura makore makumi matatu ezviitiko muAIoT, chengetedzo & neyakajeka imba indasitiri.
Kuti uwane rumwe ruzivo, ndapota shanya: www.arenti.com.
Eleczar anofara kukupa iwe yakazara tambo yemidziyo uye maturusi ako ekuvaka, ekugadzirisa maindasitiri uye epamba basa zvinodiwa.
Kubva pakavambwa, ELECZAR ine hunyanzvi mukuunza, kugadzira uye kutengesa zvinhu zvemagetsi uye chinja magiya senge ma breaker wedunhu, ma transformer, mapaneru emagetsi uye zvimwe zvakawanda, zvevatengesi, nyanzvi dzemagetsi nevamwe. Hazvina mhosva kuti mhinduro ipi yekugovera simba inokodzera iwe, unogona kuvimba nechikwata chedu kuti uwane zvinhu zvaunoda munzvimbo dzekugara, dzekutengesa nedzeindasitiri.
Zvakananga kubva kuimba yedu yekuchengetera iri muMeknes, tinopa akasiyana siyana anopfuura zviuru gumi nezviviri zvigadzirwa kubva kumakambani anozivikanwa senge Siemens, Philips, Fermax, Fresco, General Electric ...
Kuti uwane rumwe ruzivo, ndapota shanya: https://eleczarstore.com.
Post nguva: 22/03/21